Ahoana ny fomba fitantanana vary mifangaro amin'ny sakafon'ny alika | Tontolo alika
Mandritra ny androm-piainan'ny alika dia mety hihena tsindraindray ny fahasalamany. Ara-dalàna tanteraka izany: na dia miezaka mafy aza izahay, tsy ho afa-miaro anao 100% amin'ireo zavamiaina bitika rehetra mety hisy fiatraikany aminao.
Rehefa mitranga izany dia mety hahafoana ny fahazotoan-komana ianao, izay olana iray izay vao mainka miharatsy ny toe-javatra. Noho izany, hanazava isika ny fomba fitantanana vary mifangaro ao anaty sakafon'alikao.
1 Inona ny vary puffed?
2 Ahoana no fiomananao?
3 Ahoana ny fomba hanomezana azy ny alika?
Inona ny vary puffed?
Vary voafono dia vokatra voajanahary nesorina ny starch, zavatra tena tsara ho fantatra satria matetika ny starch dia miteraka tsy fahampiana sakafo amin'ny alika amin'ny alàlan'ny tsy fahaizany mandevona azy tsara. Rehefa very ny fahazotoan-komana ilay sakaizantsika na tsy mihinan-kanina firy satria efa antitra izy na satria marary dia tsy maintsy omentsika sakafo mandrisika ny hanoanana izy, izay mahatonga azy te hihinana, toa ny vary mivonto.
Ahoana no fiomananao?
Ny fomba fanomanana dia tena tsotra. fotsiny tsy maintsy mandray ny ampahany voatondro ianao amin'ny fonosana vokatra mihevitra ny lanjan'ny alikanay, sy rano hangotrahana ao anaty vilany. Ahetsiketsika mandritra ny folo segondra izy, ary dia izay. Avy eo dia mila avela hangatsiaka kely fotsiny ianao alohan'ny hanomezana azy ilay biby, na miaraka amina rano iray ihany na / na afangaro amin'ny sakafo mahazatra azy.
Ahoana ny fomba hanomezana azy ny alika?
Ny vary mihombo dia afaka manampy ny alika hiverina amin'ny fahasalamany. Saingy, miankina amin'ny zavatra tiantsika omena azy, dia afaka manampy bebe kokoa na kely isika. Ka, ohatra, raha:
Mahia izy: ankoatran'ny manome anao ny ampahany amin'ny sakafo anananao dia hampianay koa ny ampahan'ny vary mifono izay atolotra amin'ny fonosana.
Matavy be ianao: raha tiantsika ny hihena, dia tsara kokoa ny manala ampahany amin'ny sakafony, ary manolo azy amin'ny vary mifangaro.
Marary ianao ary / na antitra: Raha sanatria tsy mihinan-kanina intsony izy, dia tsy maintsy omentsika azy ny ampahan'ny vary mifofofofo, raha mety lena. Satria manana fofona sy tsiro bebe kokoa izy io, dia mandrisika ny filan'ny alika bebe kokoa.
Fantatrao ve ny amin'ireny fampiasana ny vary manototra ireny?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Ahoana ny fomba fitantanana vary mifangaro amin'ny sakafon'ny alikao
Ny kilalao mety indrindra amin'ny alika Pitbull